Xaalufka Dhirteena: Waa Maxay Doorkeenu? | Baligubadlemedia.com
badan ee aqoonta guud u leh deegaanku waxaynu ka war qabnaa in celcelis ahaan 30%uu dhulku (Earth) yahay berri, haddaba, 30% kamid ah berrigu waxa ku fadhiya kaymo baddan oo ku kala filiqsan qaaraha toddobada ah. Runtii, tirada kaymaha iyo geeduhu intan way ka badnaayeen intaanay dadku bilaabin xadaaradaha kala duwan iyo horumarka aan kala go’ lahayn ee lagu balaadhinayo dhismayaasha kala duwan ee bina aadamku u adeegsadaan haday tahay guryo, buundooyin, shirkado, xarumo ganacsi iyo dhismayaal kale oo waxtar inoo leh.
Dhirta sida galoolka, maraaga, qudhaca iyo dhirkale oo faa’iido balaadhan inoogu taagan ayaa maalin kasa la garaacaa oo dhuxul laga shidaa. Tusaale ahaan gaadhiga kaliya ee dhuxusha soo
qaadaa waxay uu ka kooban yahay ugu yaraan 30 geed oo kala duwan oo waxtar badan u lahaa deegaamada ay ku yaalaan. Ma is waydiisay imisa baabuur oo dhuxul wada ayaa maalin kasta dalka soo gala? Imisa geed ayaa la gubi karaa bishi adigoo qaadanaya celceliska ugu yar ee kor aynu kusoo xusnay? Geedke u badan ee la gubaa? Deegaanadee ayay dalka kaga yaalaan? Waa maxay waxarka ay ugu fadhiyen deegaanada ay ku yaaleen? Iyo dhammaan su’aalo badan oo u baahan inaynu la nimaadno si dhibaatada lagu hayo xaalufka dhirta aynu u qiimayno.